Tababaraha Leicester Craig Shakespear oo sheegay in qalliin lagu sameeyay difaacyahanka Huth | Berberanews.com
Home CAYAARO Tababaraha Leicester Craig Shakespear oo sheegay in qalliin lagu sameeyay difaacyahanka Huth
Tababaraha Leicester Craig Shakespear oo sheegay in qalliin lagu sameeyay difaacyahanka Huth
Leicester City ayaa waayaysa muddo siddeed toddobaad ah difaaceeda Robert Huth oo lagu sameeyey qalliin kuraanta ah markii uu dhaawac gaadhay.
Laacibkan 32 jirka ah ayaan u raacin Hong Kong kooxda lagu naanayso Dawacooyinka si uu wakhti ugu qaato dhakhtarka oo uu dibu-soo kabasho uga sameeyo dhaawaca sababay qalliinka ee kuraanka ka gaadhay.
Tababaraha Leicester ee Craig Shakespear ayaa shaaciyey in qalliin guuleystay kuraanta lagaga sameeyey difaacyahanka Huth oo qayb weyn ka ahaa guushii kooxdaasi gaadhay sannad ka hor.
Tababare Shakespear waxa kale oo uu sheegay in aanay kooxdiisa soo gaadhin dalabyo lagaga doonayo Riyad Mahrez oo bishii May shaaciyey inuu doonayo inuu ka tago Leicester City.
26 jirka reer Algeria ayaa lala xidhiidhiyey inuu ku biirayo Arsenal oo uu tababare Wenger xiisaynayo, hase yeeshee, macallinka jidka guusha kusoo celiyey kooxda ee Shakespear oo ka hadlaya arrintan waxa uu yidhi: “Riyad wax walba wuu caddeeyey, annagana taayadu way sahlan tahay. Halkan ayuu joogaa, walina wax dalab ah ma hayno, wax walba oo suuqa ku jirayna been ayay ahaayeen, waana inuu kooxdan diyaar u ahaado.”
Tababaruhu waxa caddeeyey in Mahrez uu laba toddobaad ka hor kusoo laabtay kooxda oo ay ka go’an tahay inuu wakhti kale lasii joogo, tababarkana uu si fiican u qaato.
Leicester City waxay kulankeeda ugu horreeye ee xili ciyaareedka bilaabmi doona la ciyaari doontaa Arsenal maalinta Jimcaha ah ee 11 August, kulanka xigana waxay marti gelin doontaa Brighton ka hor inta aanay u safrin Manchester United.
Previous articleJamaal Cali Xuseen: Idinkamaan filanayn inaad i soo dhaweysaan
Next article“Cidii Xiisaha U Qabtay Inay Gudoomiyaha Wakiilada Noqoto Ha-U-Soo Diyaar-Garowdo” Musharax Cabdiraxmaan Ciro
Somaliland oo ku dhawaaqday tartan caalamiya oo hablaha u gaara
Xulka Kubadda Cagta Soomaaliya oo 1-0 kaga adkaaday Zimbabwe.
Berbera: Tartanka Isdhexgalka Dhalinyarada ee Kubadda Cagta oo Lasoo Gabogabeeyey